ETU ESI EDOZI NJEHIE NGWA 5: 0000065434 - ADỤ
Etu esi edozi njehie ngwa 5: 0000065434
Steam site na Valve bụ ezigbo ọrụ kacha mma iji wụnye egwuregwu na kọmputa Windows. Ọrụ a na-agbasawanye ọbá akwụkwọ egwuregwu na-abawanye mgbe niile na plethora nke atụmatụ egwuregwu-egwuregwu iji soro ha. Otú ọ dị, dị ka ihe niile dị, Steam adịghịkwa emebi njehie metụtara ngwanrọ. Anyị enyochala akwụkwọ ole na ole edere nke ọma, yana ahụkarị Steam njehie dịka Steam Agaghị Mepee , Steam Okpu Ibu Ibu steamui.dll , Amgha njehie Steam , Steam na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-ebudata egwuregwu , wdg. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere njehie ọzọ a na-ahụkarị nke Steam - Error Load Application 5: 0000065434.
Achọpụtaghị njehie ngwa ahụ na Steam ngwa ma kama mgbe launching a Steam egwuregwu. Egwuregwu ndị na-ada ada, Elder Scrolls Scrolls, The Elder Scrolls Morrowind, wdg bụ egwuregwu ole na ole ebe njehie ngwa na-ebukarị ma na-eme ka egwuregwu ndị a ghara ịdị egwu. Ọ bụ ezie na ewepụtaghị ihe kpatara njehie ahụ, ndị ọrụ ndị na-agbanwe (gbanwee) egwuregwu ha, ma ọ bụ iji aka ha ma ọ bụ jiri ngwa ndị dị ka Nexus Mod Manager, na-anọkarị n'akụkụ nke ọzọ nke njehie ngwa ahụ.
Ihe ole na ole ndị ọzọ mere ị ga - eji nwee nsogbu ahụ gụnyere - ntinye egwuregwu na ntinye efere uzu dị iche, ụfọdụ faịlụ egwuregwu nwere ike mebie, wdg. .
tọgharịa windo nwelite windo windo 10
Etu esi edozi njehie ngwa ngwa 5: 0000065434 na Windows 10?
Usoro 1: Hichapụ Steam's AppCache folda & faịlụ ndị ọzọ na-adịru nwa oge
Usoro 2: Hichapụ ihe egwuregwu ahụ
Usoro 3: Gbaa Steam dị ka Onye nchịkwa
Usoro 4: Detuo Steam.exe na folda ọbá akwụkwọ egwuregwu ahụ
Usoro 5: Njikọ Steam na nsogbu nsogbu na iji Command Prompt
Usoro 6: Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke egwuregwu ahụ
Usoro 7: Maka ndị ọrụ 4GB Patch
Ebe ọ bụ na ọ dịghị otu ihe kpatara njehie ahụ, ọ dịghị otu ihe ngwọta ma ọ bụ nke a maara iji dozie esemokwu ahụ maka ndị ọrụ niile. Kwesịrị ịnwale ihe ngwọta niile n'otu n'otu ruo mgbe njehie ngwa ahụ ga-akwụsị ime. E depụtara azịza ndị ahụ dabere na ịdị mfe ha ịgbaso na usoro agbakwunyere ndị ọrụ 4gb patch agbakwunyerela na njedebe.
Ngwa ọ bụla na-emepụta ụyọkọ faịlụ oge (nke a maara dị ka oghere) iji mepụta ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị ntụpọ, Steam abụghịkwa nke a. A ọnụ ọgụgụ nke njehie pụrụ ibilite mgbe ndị a nwa oge faịlụ rụrụ arụ. Ya mere tupu anyị agafee ụzọ ndị dị elu, anyị ga-amalite site na ihichapụ Steam's appcache folda ma hichapụ faịlụ ndị ọzọ na-adịru nwa oge na kọmputa anyị.
1. 1. Mepee Windows File Explorer na isi ala na-eso ụzọ C: Faịlụ mmemme (x86) Steam .
2. Chọta ngwa nchekwa (ọ na-abụkarị nke mbụ ma ọ bụrụ na faịlụ na folda ahụ na-edozi mkpụrụedemede), họrọ ya wee pịa ihichapụ Igodo na keyboard gị.
Ihichapụ faịlụ nwa oge na kọmputa gị:
1. .dị % mp% n'ime igbe iwu Run (Windows igodo + R) ma ọ bụ windo ọchụchọ Windows (igodo Windows + S) wee pịa tinye.
2. Na windo nyocha faịlụ na-esote, họrọ ihe niile site na ịpị Ctrl + A .
3. Pịa Mgbanwe + del ihichapụ kpamkpam ihe ndị a niile nwa oge faịlụ. Ihichapụ ụfọdụ faịlụ nwere ike ịchọ ikikere nchịkwa, ị ga-enweta mmapụta na-arịọ maka otu ihe ahụ. Nye ikikere mgbe ọ bụla achọrọ ma mafee faịlụ ndị enweghị ike ihichapụ.
Ugbu a, na-agba ọsọ egwuregwu na-ahụ ma ọ bụrụ na ngwa ibu njehie ka na-adịgide. (Anyị na-akwado gị ka ị na-ehichapụ faịlụ na-adịru nwa oge na kọmputa gị.)
Yiri Steam's appcache folder, ihichapụ folda egwuregwu nsogbu nwere ike inyere gị aka idozi esemokwu ahụ. Ihichapụ faịlụ egwuregwu na-emegharị ntọala omenala niile ka ọ bụrụ ọnọdụ ndabere ha ma mee ka egwuregwu ahụ dị ọhụrụ.
Otú ọ dị, tupu ị gaa n'ihu na usoro ahụ, mee nyocha Google ngwa ngwa iji mara ebe egwuregwu gị na-azọpụta ọganihu egwuregwu gị; ma ọ bụrụ na faịlụ ndị ahụ nọ na folda ahụ anyị ga-ehichapụ, ị nwere ike ịchọrọ ịkwado ha na ọnọdụ dị iche ma ọ bụ nwee ike tufuo ọganihu egwuregwu gị.
1. 1. Ẹkedori Windows File Explorer (PC a ma ọ bụ Kọmputa m na nsụgharị ochie nke windo) site na ịpị akara ngosi ya na-atụdo na taskbar ma ọ bụ na desktọọpụ ma ọ bụ jiri nchịkọta keyboard Igodo Windows + E .
2. Pịa na Akwụkwọ (ma ọ bụ Documents m) n'okpuru nhọrọ nnweta ọsọ ọsọ dị na mpịgharị aka ekpe. ( C: Users * username * Documents )
3. Chọọ folda akpọrọ otu egwuregwu nsogbu. Maka ụfọdụ ndị ọrụ, a na-etinye nchekwa folda egwuregwu n'otu n'otu na folda nchekwa akpọrọ Games (ma ọ bụ Egwuregwu m ).
4. Ozugbo ịchọtara folda nke egwuregwu ahụ nwere nsogbu, nri-pịa na ya, ma họrọ Hichapụ site na nhọrọ menu.
Pịa na Ee ma obu OK na mmapụta ọ bụla / ịdọ aka ná ntị nke nwere ike ịpụta na-arịọ gị ka ị kwado ọrụ gị. Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa na-agba ọsọ egwuregwu.
Ihe ọzọ nwere ike ime ka Steam nwee ike ịkpa àgwà bụ na enweghị ikike niile dị mkpa. Ihe dị mfe maka nke a bụ imechi Steam kpamkpam wee weghachite ya dịka onye nchịkwa. A kọọrọ usoro a dị mfe iji dozie ọtụtụ nsogbu metụtara Steam, na-eme ka ọ baa uru.
1. Akpa, mechie ngwa uzuoku ọ bụrụ na ị nwere ya mepee. Ọzọkwa, nri-pịa na ngwa akara ngosi na sistemụ gị tray ma họrọ Ụzọ ọpụpụ .
Nwere ike imechi Steam kpamkpam na Task Manager kwa. Pịa Ctrl + Shift + Esc iji malite Task Manager, họrọ usoro uzuoku, wee pịa bọtịnụ Task bọtịnụ na ala aka nri.
2. Pịa aka nri na akara ngosi desktọọpụ Steam ma họrọ Mepee ebe faịlụ site na nchịkọta ọnọdụ ndị na-esote.
windo windo 10 icon na-efu efu
Ọ bụrụ na ịnweghị akara ụzọ mkpirisi na ebe, ị ga-eji aka gị chọta faịlụ steam.exe. Site na ndabara, faịlụ ahụ nwere ike ịchọta na C: Faịlụ mmemme (x86) Steam na Njikwa faili. Otú ọ dị, nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụ ikpe ma ọ bụrụ na ịhọrọ Ntọala Omenala mgbe ị na-etinye Steam.
3. Pịa aka nri na steam.exe faịlụ ma họrọ Njirimara . I nwekwara ike pịa Alt + Tinye ka ịnweta Njirimara ozugbo mgbe ahọrọ faịlụ ahụ.
4. Gbanwee na Ndakọrịta taabụ nke windo Njirimara.
5. N'ikpeazụ, tinye akà rà / lelee igbe dị n’akụkụ ‘Gbaa mmemme a dịka onye nchịkwa.’
6. Pịa na Tinye bọtịnụ iji chekwaa Njirimara gbanwere na mgbe ahụ Ọ DỊ MMA ịpụ.
Ẹkedori Steam na egwuregwu na lelee ya ma edozila Ihie Ozi Ngwa 5: 0000065434.
Dịka e kwuru na mbụ, a na-ebute njehie ngwa ngwa n'ihi folda ntinye egwuregwu na folda nrụnye steam dị iche. Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ike itinye egwuregwu ahụ na draịva dị iche kpam kpam. N'okwu ahụ, a na-amata faịlụ steam.exe na folda egwuregwu ahụ ka ọ bụrụ ihe ngwọta kachasị mfe.
1. Gaba azụ na Steam ngwa nchekwa na kọmputa gị (lee nzọụkwụ 2 nke usoro gara aga) wee họrọ Ugboro abụọ faịlụ. Ozugbo ahọpụtara, pịa Ctrl + C Detuo faịlụ ma ọ bụ pịa aka nri na ya ma họrọ Detuo.
2. Ugbu a, anyị ga-agagharị na folda egwuregwu nsogbu. (Site na ndabara, Steam egwuregwu nchekwa nwere ike na C: Faịlụ mmemme (x86) Steam steamapps nkịtị . ).
3. Mepee folda egwuregwu ahụ wee pịa Ctrl + V iji mado steam.exe ebe a ma ọ bụ pịa aka nri na mpaghara efu ọ bụla na folda ahụ wee họrọ Tapawa na menu nhọrọ.
Ọzọkwa Gụọ: Ngwa ngwa nweta Steam Nseta ihuenyo nchekwa na Windows 10
Methodzọ ọzọ iji jikọta Steam na egwuregwu nsogbu bụ site na Command Prompt. Usoro a bụ otu ihe ahụ gara aga, mana kama ịkwaga steam.exe, anyị ga-aghọ aghụghọ Steam ikwere na egwuregwu ahụ bụ ebe ọ kwesịrị ịbụ.
1. Tupu anyị aga n'ihu na usoro ahụ, ị ​​ga-achọ ịnwe ọnọdụ abụọ dị ala - Adreesị ntinye Steam na adreesị echichi nke nsogbu ahụ. A gara leta ọnọdụ abụọ ahụ na ụzọ ndị gara aga.
Ikwughachi, ndabara adreesị ntinye Steam bụ C: Faịlụ mmemme (x86) Steam, na onye egwuregwu nchekwa nwere ike ịchọta na C: Faịlụ mmemme (x86) Steam steamapps nkịtị .
2. Anyị ga-achọ emeghe iwu ozugbo dị ka onye nchịkwa iji jikọta faịlụ uzuoku na ọnọdụ egwuregwu.
3. Jiri nlezianya pịnye cd soro site na adres nke folda egwuregwu na akara akara. Pịa Tinye ka imezu iwu ahụ.
CD C: Faịlụ mmemme (x86) Steam steamapps nkịtị Counter-Strike Global iwe
Site na ịme iwu a, anyị na-agafere na folda egwuregwu nsogbu na iwu ozugbo.
4. N’ikpeazụ, pịnyere iwu na-esote wee pịa Tinye.
mklink steam.exe C: Mmemme mmemme (x86) Steam steam.exe
windows 10 nwa ihuenyo na òké
Chere maka sekọnd ole na ole ma hapụ iwu ozugbo mezuo iwu ahụ. Ozugbo e mere ya, ị ga-enweta ozi nkwenye ndị a - 'Njikọ ihe atụ emebere maka …….'.
Ọzọ ngwọta nkịtị maka njehie ibu ngwa 5: 0000065434 bụ iji nyochaa iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ egwuregwu. Steam nwere ihe arụpụtara maka nke ahụ ma dochie faịlụ ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ na-efu efu ma ọ bụrụ na emetụtala iguzosi ike n'ezi egwuregwu.
1. 1. Mepee Steam ngwa site na ịpị aka na akara ngosi desktọọpụ ya abụọ ma ọ bụ chọọ ngwa ahụ na nyocha ọchụchọ wee pịa Mepee mgbe nsonaazụ ọchụchọ laghachi.
2. Pịa na Ọba akwụkwọ Nhọrọ dị ugbu a n'elu windo ahụ.
3. Pịgharịa site na ọba akwụkwọ nke egwuregwu jikọtara gị na uzuoku na akaụntụ ma chọta onye a na-enwe na ngwa ibu njehie.
4. Pịa aka nri na nsogbu nsogbu ma họrọ Njirimara site na onodu menu.
5. Gbanye na Mpaghara faịlụ taabụ nke windo ihe egwuregwu ahụ wee pịa Nyochaa Iguzosi Ike n'Ezi nke Game faịlụ… bọtịnụ.
Di na nwunye nke gamers na ahu nagide 4GB patch ngwá ọrụ iji na-agba ọsọ Fallout New Vegas ọzọ seamlessly nwekwara kọrọ na-enwe ngwa ibu njehie. Ndị ọrụ a doziri njehie ahụ site na ịgbakwunye -SteamAppId xxxxx ka iche igbe.
1. 1. Pịa aka nri na mkpirisi akara ngosi maka akara 4GB na desktọọpụ gị wee họrọ Njirimara .
2. Gbanye na Cutzọ mkpirisi taabụ nke windo Njirimara.
3. Tinye -SteamAppId xxxxxx na njedebe nke ederede na igbe ederede Target. Na xxxxxx ekwesịrị iji dochie anya NJ ngwa ngwa Steam.
4. Iji chọta otu ID ngwa egwuregwu, gaa na ibe egwuregwu na Steam. Na elu URL mmanya, adreesị ga-ndị na-esonụ usoro store.steampowered.com/app/APPID/app_name . Nọmba ndị dị na URL ahụ, dịka ị nwere ike ibu amụma, na-anọchi anya NJ ngwa ngwa egwuregwu.
5. Pịa na Tinye ma soro ya Ọ DỊ MMA .
9 Software kacha mma weghachite efu (2020)
Esi edozi 2000 Error Network on Twitch
Wzọ 5 iji dozie Injin Bluestacks agaghị amalite
Ka anyị mara nke nke n'elu ụzọ nyeere gị tufuo nke njehie ibu ngwa 5: 0000065434 ma ọ bụ ọ bụrụ na e nwere ihe ngwọta ndị ọzọ anyị nwere ike funahụ.
Esi adịgboroja Ọnọdụ GPS na android
Ka ịtọọ adịgboroja ọnọdụ GPS na ekwentị gam akporo ịkwesịrị ikwe ka ebe ịkwa emo na Mmepụta nhọrọ. Na-esote, budata ngwa ọnọdụ GPS adịgboroja site na
Etu esi edozi foto na Twitter adighi ibu
Kedu ihe kpatara foto na Twitter anaghị ebu? Otu n’ime isi ihe kpatara igbu oge a bụ oke ibu na sava Twitter.
Wzọ 6 Idozi Error Memory Dump Error
Zip ma ọ bụ Unzip faịlụ na nchekwa na Windows 10
Idozi DLL achọtaghị ma ọ bụ na-efu na Windows Computer gị
Etu esi agbanye okwu na JPEG
Wzọ 9 Idozi Ozi Sistemụ Disk ma ọ bụ Njehie Diski Na-adịghị
8 Kacha mma Swap ngwa ọdịnala maka gam akporo na iPhone (2021)
Gbanyụọ Dobe Shadow nke Desktọpụ akara ngosi na Windows 10
Etu aga-esi nweta data ehichapụ na Google Chrome?
Gbanwee Ọsọ Batrị Dị Mkpa na Windows 10
Etu esi agbanwe ụdịdị Font na WhatsApp
windo 10 na-apụ mgbe niile site na wifi
nkwụsị koodu irql bụghị obere ma ọ bụ hà windows 10
esi laghachi tupu windo melite
internet disconnects kwa awa windo 10
Igwe okwu windo 10 anaghị arụ ọrụ na 2018